အခြားရာသီအလိုက် ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသိုးမွှေးအလှဆင်ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်နိုင်ငံသည်အခြားရာသီအလိုက် ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသိုးမွှေးအလှဆင်ပေးသူများ၊ စက်ရုံ
ထောက်ခံချက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများပွဲတော်တစ်ခုအနေနှင့်အီစတာသည်ကြီးမားသောပွဲတော်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်၏အဓိကအကြောင်းအရာအသစ်၏အစဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်၊ ကောင်းစွာ။ နွေ ဦး ရာသီမှာအီစတာအကြောင်းမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ချစ်စရာယုန်? ကြက်ဥနှင့်ပတ်သက်သောအရာ နတ်သမီးပုံပြင်များလား သိုးမွှေးအကြောင်းစဉ်းစားသလား သိုးမွှေးသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အိမ်အလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အပြင်အဆင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ သိုးမွေးကို th အဖြစ်သုံးပါတယ်။
ထောက်ခံချက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများပွဲတော်တစ်ခုအနေနှင့်အီစတာသည်ကြီးမားသောပွဲတော်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်၏အဓိကအကြောင်းအရာအသစ်၏အစဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်၊ ကောင်းစွာ။ အီစတာပွဲမှာမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ကြက် ဥလား သိုးမွှေးအကြောင်းစဉ်းစားသလား သိုးမွှေးသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အိမ်အလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အပြင်အဆင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့က fluffy ကြက်စေရန်အပ်ခံစားခဲ့ရယာဉ်ကိုအသုံးပြုပါ။ အချို့ ...
ထောက်ခံချက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများပွဲတော်တစ်ခုအနေနှင့်အီစတာသည်ကြီးမားသောပွဲတော်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်၏အဓိကအကြောင်းအရာအသစ်၏အစဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်၊ ကောင်းစွာ။ အီစတာပွဲမှာမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ယုန်? ဥ? သိုးမွှေးအကြောင်းစဉ်းစားသလား သိုးမွှေးသည်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အိမ်အလှဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အပြင်အဆင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ Easter Bunn တွေပြုလုပ်ဖို့သိုးမွှေးကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုကစားခွင့်ပေးတယ်။
အိမ်အလှဆင်, နံရံအလှဆင်, နံရံအနုပညာ, ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာ, အဆင်တန်ဆာ, အပြင်အဆင်,